JINGHPAW KASA: လေပုပ်အနံ့ခံ မသတ္တ၀ါတို့အကြံ
လာမည့်အပတ်ကျရင် မြစ်ကြီးနားမှာ ကြံ့ဖွပ်ဇနီး ကချင်အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗိသုကာတစ်စု ကိုယ်ဟန်ပြ စီတန်းလှည့်လည်ဖို့ သတင်းစကား ကြိုတင်ကြားထား ရလို့ အံသြမိပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ`ပိုးသာကုန်၊ မောင်ပုန်စောင်းမတတ်` ဆိုတာမျိုး မဖြစ်စေချင်လို့ တစ်နေ့တာ ဖျော်ဖြေရေးမို့ ဈေးကြီးကြီး အလှပြင်စရာတော့ မလိုဘူးထင်ပါရဲ့။ ကချင်အမျိုးသမီးကြီးများရဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာ၊ ဝါသနာ၊ အကြင်နာ၊ ကရုဏာ အစရှိတဲ့ နာကြီးငါးပါးကိုလည်း ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုချင်ပေမယ့် ယူကျုံးမရလည်း ဖြစ်မိပါတယ်။
ဆင်ခြင်စရာလေးတစ်ခု မှတ်ကျောက်တင်ဖို့ ထပ်လောင်း ဝေငှချင်ပါသေးတယ်။ ဒေါ်လေးတို့ လိုချင်တောင့်တနေတဲ့ အရာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၇) နှစ်လုံးလုံး ခံစားခဲ့ရတဲ့ အရသာထူး အခြေအနေမျိုးကို ဆိုလိုသလားမသိ။ ထောက်ပြလိုသည်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၇)နှစ်တာကာလဟာ အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်းထားတာကလွဲပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး၏ ဆန့်ကျင်ဘက် ဆီသို့ အရှိန်ပြင်းပြင်း ခရီးဝေးနှင်ခဲ့ကြတာ သတိထားမိစေလိုပါတယ်။
အဆိုပါခရီးဝေးမှ မူလနေရာ ပြန်ရောက်ဖို့ရယ်၊ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့ရယ်၊ ပြည်ထောင်စုကြီး မပြိုကွဲဖို့ရယ်၊ တိုးတက်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရယ် အစရှိတဲ့ အများပြည်သူတွေရဲ့ တကယ့်တကယ် အဓိကလိုအပ်ချက်တွေကို မပျက်ပျက်အောင်ဖျက်ပြီး မပျောက်ပျောက်အောင် ဖျောက်နေသူတွေဟာ KIO/KIA တွေမဟုတ်ကြဘဲ ကြံ့ခိုင်ရေးအမည်ခံ လက်ရှိအကြံအဖန် ရာဇဝတ်သားလက်ကျန် တွေသာဖြစ်ကြောင်း အထူးလေ့လာဆန်းစစ် စေလိုပါတယ်။ ဒေါ်လေးတို့ရယ် - ကချင်အမျိုးသမီးများရဲ့ အနာဂတ်သမိုင်း စန်းပွင့်လှပသင်းပျံ့ မွှေးကြိုင် လိုပါက စစ်မှန်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို လှမ်းမြင်တတ်ဖို့လည်း လိုပါလိမ့်မယ်။
ယခုဖြစ်ပုံကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မီးမောင်းထိုးပြစတမ်းဆိုရင် ဗိုက်နာနေသူ တစ်စုံ တစ်ဦးက လူကြားသူကြားမှာ တိတ်တိတ်ကလေး လေပုပ်မြူးလိုက်တဲ့ဟာကို ဦးဏှောက် မရှိတဲ့ ခွေးတစ်စုက မစင်တုံးများတွေ့လိုတွေ့ငြား အမြီးတလှုပ်လှုပ်နဲ အလုအယက်အနံ့ခံ စွန့်စားရှာဖွေနေကြသလို ဒေါ်လေးတို့ခမျာ မကြာမီစီတန်းလှည့်လည်မယ့် အစီအစဉ်ဟာလည်းပဲ ကြံ့ခိုင်ရေးဦးကြီးတွေ ဗိုက်နာလို့ လေပုပ်မြူးလိုက်တဲ့ဟာကို `အု အု အု အု - သူ့စကားလူမသိ၊ လူ့စကားသူမသိ၊ သနားပါဘိ` ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုး မရောက်စေလိုကြောင်း စေတနာမွန်ဖြင့် မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ရ ကြောင်းပါခင်ဗျား။
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၂)ရက်။
HTAU SAK Kau ga lo.. grai pawt mayu wa sai law..
JINGHPAWKASAeyup maw yang she ya na zawn very bad shiga ni hti lu ai majaw pawt mayu na nmai yup ai law. Dai HKAMAI ni na YUZANA nta hpe JINGHPAW KASA kaw na computer rau GPS guided rocket rau gap kau na hku di u law..
မောင်ပေါက်ကြိုင်း,တာလောကြီးပြောတာမှန်တယ်။ ကြံ့ဖွတ်တွေရဲ့ ဖာခန်းကိုချီတက်ကြမယ့်ကချင်အမျိုးသမီးတွေကိုတော့အော့ကျောလှန်လို့မဆုံးတော့ဘူး။
ndai shiga nna ai kanu num ni na byaubyau mat na tsang ra ai.tinang mare buga masha ni hpe lawan tsun sanglang dan saga...shiga lu hti sai manaw manang ni e..
ကချင်အမျိုးသမီးများ ဆနပြတာကို အထူးအော့ကျောလန် ကန့်ကွက်နေတာက သိပ်မကောင်းဘူးထင်မိပါတယ်။ ဘာအကြောင်းပြချက်များပါလဲ၊ ကြံခိုင်ရေးပါတီဝင် ကတော်တွေမို့လို့လား၊ အဲဒီမိန်းမတွေရဲ့ ယောကျာင်္းတွေပဲ ကြံခိုင်ရေးပါတီဝင်ဖြစ်တာနဲ့ ဇနီးသည်တွေက ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဖြစ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ သီအိုရီက သိပ်လက်တွေ့မဆန်လှပါဘူး၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကချင်က ကချင်ပါပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ ဝေဖန်တာများစောလွန်းနေသလား၊ ဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်ပါဦး၊ ကချင်အမျိုးသမီးများ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ချင်ပါတယ်။ ဒေါ်ဂျာခေါန်ဟာ ဦးခမိုင်တန် (ကြံ့ဖွတ်လွှတ်တော်အမတ်) ရဲ့ဇနီးမှန်ပေမယ့် ဒေါ်ဂျာခေါန်ဟာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါလေးတော့ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ကြည့်ကြပါစို့လား။။။။ အေးလေး ဒီဆနပြပွဲမှာ ဟိုဘောင်းဘီချွတ် ကောင်တွေရဲ့လေသံလိုပဲ ဆိုရင်တော့ .......
ဂန်ရှောင်လား ဂမ်ရှောင်လား။ အခုထိ တွေဝေနေ တာလား။ ဦးခမိုင်တန် ကို ထိုင်ဆိုလျင်ထိုင် ၊ ထဆိုလျင်ထ ၊ ကဆိုလျင်က ၊ လီးထောင်ဆိုလျင်ထောင် လုပ် ခိုင်းတာ က ဘယ်သူ လို့ ထင်လဲ။ သူ့မိန်းမဘဲ၊ အခုလဲသူ့ မ်ိန်းမ ကဦးဆောင်ပြီး ဆနပြဖို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ ဘယ်သူတွေက စီတန်းလှည့်လည်ဖို့ နောက်က နေ လိုက် မှာ လဲ။ သီအိုရီအရ ဆိုလျင် တော့ ဘာမှမသိတဲ့ ကက်သလစ် ဘာတာ သူတွေ ရယ်၊ ကက်သလစ် လီးဆာနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရယ် ပိုက်ဆံလတ်စားတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေရယ်။ ဦးခက်ထိန်နန် ပါနေတယ်ဆိုတော့ နှစ်ခြင်းအသင်းအုပ် တဲ့ ဆရာ တချို့နှင့်ဘာတာသူ တွေရယ်ဘဲ ဖြစ်မှာပေါ့။
GAM SHAWNG NGU AI WA , KYAT HPUT ,MYEN ASUYA AHPYET MANAM SHA YU SAI RAI NGA AI ,grai manam pyaw sam ai gaw e, myen hpyet yin kap ya byin mat sai rai nga ai. SHAWNG GAM .
Hkyet Krung na Hkamaisha Ngan Seng said...
Hkyet Hting Nan, Lajawn Ngan Seng hte Hka Mai Tang ni gaw sa-ngawn manam ai de sa pa ai rudi kata re ai u-hka zawn re ai ni rai ma ai. Rai tim ndai lang gaw amyu sha niashingma kaw mam ting nna amyu sha niasai chyup ai gaw nau hprau sai. Ya mung dai niamadu jan ni kanau ni woi awn ai re da loooooo...
Ndai Myen hpyenamayam ni hpe mau ai gaw lam ni, ndai Myen mayam ni hte kanawn nna matut hpaga ga sha nga ai KIO/KIA ningbaw nkau mi, amyu sha lam hta lam amyu myu hku shakut nga ai KIO/KIA nre ai amyu sha ningbaw ningla ni hpe gaw mara mu amyu myu jahpoi chye nna Myenamayam ni hpe gaw ga hkaw mi mung lawp nnga ai KIO/KIA ningbaw ni hpe mung grai mau nngai loooo... KIO/KIA ningbaw ni ndai amyu sha sai chyup lep nat shalawa ni hpe mara tsun ai ga na yu myit ni? Myit yu hpa langai rai nga ai!
မင်းအလကားနေ၇င်း ကက်သလစ်ဘာတာကိုစောကားနေတာ မင်းတို့ ကေဘီစီ ဆိုတာဘယ်ကနေစ ခဲ့တာလည်း နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီးလဲ မင်းတို့ K B C ဆိုလို့ဖြစ်လာတာ မင်းအဲဒီလိုေ၇းလိုက်ခြင်းအားဖြစ် ငါတို့ကချင်တွေစည်းလုံးဖို့ဝေလာဝေ မင်းကိုကြည့်၇တာလည်းကြံ့ဖွပ်လီးစုပ်ကောင် ဘဲ မင်းသတ်တိရှိ၇င် မင်းနေ၇ပ်လိပ်စာ ပေးကွ မင်းလိုကောင်လီးဘဲ
မင်းတို့လိုကောင်တွေများနေလို့ပေါ့ ငါတို့ကချင်တွေ မစည်းလုံးနိုင်တာ ဟေ့ကောင် မင်းမှတ်ထားဖို့ က ကက်သလစ်ဘာတာဆိုတာ မင်းတို့ kbc မ ပေါခင်တည်းကရှိနေပြီးဆိုတာ မှတ် ထား မင်း လိုကောင်းချီးစားအတွေးနဲ့တွေးပြီးလာပြောမနေ နဲ့ ကွာ
Mau sa mau sa, Jinghpaw shada da matsat shabat nga nna Myen hku ga law hkat taw ai Jinghpaw ahadang yan e....... Myen hpyen waakabung dum na hpe bungli she rai wa nga ai lo.
share naw said...
myen hpe nra ai majaw ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ningbaw niamadu jan ni hpe pawt mayu ai ,mung masa Myu shalam yan kaw nna , Nawku Hpung masa hte Jing hpaw shada GA BAW shai wa ai gaw ,Myen waaAung dang lam mai lu ai ga si ni myit jasat ni tai taw nga ai hpe dum nna ndai zawn shatan ga ni shada maw ai baw ga ni nshabrawng ga shadum dat nngai , yawng gaw amyu tsaw ai ni re ,ya gaw amyu shada pyi bai zangayai wa na zawn rai taw nga sai hpe dum ga .
Mung masa ga baw kaw nna KBC R.C MAKAM MA SHAM GA BAW MA GA de woi manghkang shapraw ai wa gaw KYAT HPUT MYEN wa she rai na re .SHI yaw shada ai lam awng dang nga ai hpe NAN LAHKAWNG dum mu .MANANGWA BUNGLI KABA galaw nga ai lu yaw. SADI GA .K.B.C. hte R.C.lapran hta SUMPRAT KABA dit jun taw nga ,ANHTE W.P SHA NI yawng chye na,dum hprang let nhkap kau ga yaw ,SUMPRATamajaw ga ayai mat wqa ai hte NAY PYIDAW MANAU KABA DUM SAI YAW ,zen ga, HPUNAU NI E. W.P BRANG.
MKA kaw Myenjan tai ai Jinghpaw ni mung dabikmauk na lam na lu ai,, dai hte seng nna anhte gaw Media hteatsawm di nna bai n htang kasat ra na re,,
Simsa lam ra ai Myen jan ni, Thein Sein asuya hte Tatmadaw de simsa lamamatu, hpyendap dawm, majan jahkring sa wa na matu hpyi shawn, n gun madun ngu shiga shale ga Jinghpaw shiga dap yawng hpe shana da lu yang mung kaja ai ngu mu ai... shiga n shabrawng ya na ahkyak ai, shanhteayaw shada ai lam hpe Thein Sein hte Myen hpyendap de Myen hpyen majan hpaw ai lam shazim na matu, Myen jan ni hpyi ngu divert galaw yang kaja ai,
Simsa lamamatu KIO/KIA hpe mara shagun nna, n gun madun ai hkrang kachyi mi mung nmai shale ai,,,,, shiga hte myusha hpe hkye la ga ,,
shana ai ,,MLH
Ah Ba Hkun (ဂျိုးငှက်ဖြူ) said...
E le, anhte W.P shada da wa, ndai zawn myen hku galaw hkat taw ai gaw njaw na re. Ndai gaw anhte Wupawng sha ni, Myit nhkrum ai lam nnga ai ngu ai hpe madun dat ai sha re. Grai nan kaya kahpa she rai sai. Anhte yawng myitk hkrum myit ra hte Wunpawng Mungdan Shang Lawt lu hkra sha jawm shakut mat ga. R.C mi nnga, K.B.C mi nnga yawng gaw wunpawng mungdan shanglawt lu hkra atsam nga ai made Shakut taw ai hkrai re. Wunpawng Myu sha ni hta gaw R.C hte K.B.C gaw ngun ja ai lahkawng re ai majaw ndai lahkawngalapram sumprat dawk mayu ai myenamayam tai ai wunpawng nkau mi ai majaw sha anhte n-gin hka hkat ga i. Ndai zawn re ai, myu sha myit nrawng ai myen mayam ni hpe anhte ni Tsi (သန်း) gut ai zawn gut tam HTAU kau ga. Nawku hpung hku nna mung anhte shada da grai shadum hkat ga i..
တာလောကြီးကကျေးတောသားမောင်ပေါက်ကြိုင်ရေ ခင်ဗျားက ကချင်မှဟုတ်ရဲ့လားဗျ ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တစ်ခုလောက်ပြောချင်တယ်ဗျ ကျိုပ်တို့ ကချင်တွေက အဲဒီလောက်မရိုင်းစိုင်းဘူးဗျ ပြီးတော့ကိုယ်ကိုးကွယ်သည် ဖြစ်စေ မကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ ဘယ်ဘာသာရေးကိုမှ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းမဝေဖန်ဘူးဗျ။ ပြီးတော့စစ်မက်ဖြစ်ပွားရတာ ဘယ်သူ့ကြောင့်ဆိုတာ ခင်ဗျာကသိလို့လား ပြောချင်တာကဘယ်သူမှသေချာမသိပါဘူး စစ်အစိုးရနဲ့ KIA/KIO ကလွဲရင်ပေါ့လေ။ ပြည်သူတွေဘက်က ယခုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မယ် ဆိုတာကိုဘဲ စောင့်ကြည့်ကြရအောင်လား ကျေးဇူးတော့မတင်ပေမဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးတော့ရှိမှာပါ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အရမ်းချစ်ရတဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွက် လုပ်နေပေးလို့ဘာဘဲ။ သူတို့လဲဂုတ်သွေးအမြတ်မထုတ်လောက်ဘာဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့သားသမီးတွေကြီးပြင်းပြီး သူတို့ဘိုးဘွားတွေ သေဆုံးခဲ့တဲ့နေရာ ဖြစ်လို့ဘာဘဲ။ တစ်စုံတစ်ရာ ကချင်ပြည်နယ်အတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအတွက် အမြတ်မဖြစ်ပေဘူးလား။ ကျွန်တော်ကတော့ပြစ်တင်ဝေဖန်နေမဲ့ အစား ဒီအဖြစ်အပျက်ကနေ ကချင်ပြည်နယ်အတွက် တစ်ခုခုကောင်းတာလေးဖြစ်လာဖို့ဘဲ ဆုတောင်းမိဘာတယ်
Praise the Lord, the USDA (Union Solidarity and Development Association) Party plan for protest is cancelled. Click this link and read the interview. http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/9719-2012-07-26-11-48-26.html
come on, you cann't beat the good with bad intention. If you are doing the right thing, then why are you so afraid of something? The fact that you, Hkamai Tang's wife, and Hkyet Hting Nan family, associate with USDA make the people think that you are licking the ASS of fucking Burmese government. Why don't you renounce yourself that you are no longer part of USDA? Only then the Kachin people of Kachin State will believe in your movement.
Now just fuck yourself off. Mind only on your fucking gold mining business. You ruin the beauty of the Irrawaddy river.
အပေါက မောင်ပေါက် တော့လာမကြိုင် နဲ့ချီးပေါက်တော့ ကျယ်သွားမယ် သတိထား